Cockpit: Ngwa nwere interface weebụ maka nchịkwa sava | Site na Linux
Linux Post Wụnye | 19/08/2021 06:00 | Netwọk / Sava, Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ
Ụbọchị ole na ole gara aga, anyị nyochara nnukwu na ama ama software software Ngalaba IT nke netwọk na sava oku Nagios Isi. Na n'etiti ndị ọzọ na ya, anyị na -ekwu "Kokpiiti".
Yabụ taa, anyị ga -enyocha ngwa ngwa sọftụwia ọzọ a na -akpọ "Kokpiiti", ebe, ọ nwere ike ịba uru nke ukwuu maka Ndị nchịkwa Sistem / Server (SysAdmins), maka ihe ọ bụla ọzọ Ọkachamara IT o Onye na -anụ ọkụ n'obi kọmpụta na Linux.
Maka ndị nke na -enyochabeghị post anyị gara aga Nagios Isi na ngwaọrụ ndị ọzọ yiri ya n'ọhịa Netwọk na sava ma ọ bụ ojiji pụrụ iche maka Ndị nchịkwa Sistem / Server (SysAdmins), anyị ga -ahapụ n'okpuru njikọ ụfọdụ ozugbo na ụfọdụ mbipụta gara aga metụtara mpaghara IT a:
"Nagios® Core ™ bụ netwọkụ mepere emepe yana ngwa nleba anya sistemụ. Ọ na -enyocha ndị ọbịa (kọmpụta) na ọrụ ndị ị kwupụtara, na -eme ka ị mara mgbe ihe na -adịghị mma na mgbe ha ka mma. Emebere Nagios Core ka ọ rụọ ọrụ n'okpuru Linux, n'agbanyeghị na ọ kwesịrị ịrụ ọrụ n'okpuru ọtụtụ sistemụ arụmọrụ ndị ọzọ dabere na Unix. Ọzọkwa, ọ bụ ụdị n'efu nke ngwa anyị ugbu a akpọrọ Nagios XI." Nagios Core: Gịnị bụ Nagios na otu esi etinye ya na Debian GNU / Linux?
1 Cockpit: Nọmba ụdị kwụsiri ike 250
1.1 Kedu ihe bụ Cockpit?
1.3.1 Budata, wụnye na jiri
1.3.2 Ihuenyo gbaa
Cockpit: Nọmba ụdị kwụsiri ike 250
Kedu ihe bụ Cockpit?
Dị ka webụsaịtị nke Cockpit Project, "Kokpiiti" bụ ngwa ngwanrọ nke akọwara dị ka ndị a:
"NAỌ bụ ngwa eserese webụsaịtị maka sava, ezubere maka onye ọ bụla, ọkachasị ndị na-enweghị ahụmịhe na Linux, gụnyere ndị nchịkwa Windows Operating Systems. Ọzọkwa, maka ndị maara Linux ma chọọ ụzọ dị mfe na eserese iji jikwaa sava na kọmputa ndị ọzọ na netwọkụ. N'ikpeazụ, ọ dịkwa mma maka ndị nchịkwa IT nwere ahụmịhe bụ ndị na -ejikarị ngwaọrụ ndị ọzọ eme ihe, mana ha chọrọ ịnwe nchịkọta nke sistemụ ọ bụla."
Ndị mmepe ya kọwara nke a nke ọma "Kokpiiti":
Ọ dị mfe iji: N'ihi na ọ na -ebelata ojiji nke iwu njedebe, na -eme ka arụmọrụ nke ọrụ dị mfe site na iji ihe ntanetị wee nwee ike ịrụ ọrụ, nke nwere ọdụ ụgbọ ala agbakwunyere, nke bara uru mgbe eji ya dị mkpa ma ọ bụ achọrọ ya.
Ọ nwere ezigbo njikọta na sistemụ arụmọrụ ejiri: Ebe ọ bụ, ọ na -eji API nke dị na sistemụ. Ọ naghị eweghachite sistemụ ma ọ bụ tinye akwa nke ngwa nke aka ya. Site na ndabara, Cockpit na -eji nbanye na ohere nke ndị ọrụ sistemụ nkịtị. Nbanye na netwọkụ na-akwadokwa otu nbanye na usoro nyocha ndị ọzọ. Ọzọkwa, ọ naghị eri ihe ma ọ bụ na -agba n'okirikiri mgbe ejighị ya. N'ihi na ọ na -agba ọsọ na -achọ, ekele maka ịgbalite soket systemd.
Enwere ike ịgbasa ya. Yabụ, ọ na -enye gị ohere ide modulu nke aka gị iji mee ka kokpiiti mee ihe achọrọ.
Ọzọkwa na "Kokpiiti" enwere ike ịrụ ọtụtụ ọrụ, n'ime nke a ka ekwuru 10 ndị a:
Nyochaa ma gbanwee ntọala netwọkụ.
Jikwaa nchekwa (gụnyere RAID na nkebi LUKS).
Mepụta na jikwaa igwe mebere.
Budata ma rụọ arịa.
Chọgharịa ma chọọ ndekọ ndekọ.
Nyochaa ngwaike nke sistemụ.
Melite ngwanrọ a.
Jikwaa akaụntụ onye ọrụ.
Tupu ịmalite akụkụ a, ọ dị mma ịmara dị ka ọ dị na mbụ maka okwu a bara uru, anyị ga -eji nke mbụ Respin Linux akpọ Ọrụ ebube GNU / Linux, nke dabere na MX Linux 19 (Debian 10). Nke e wuru na -eso anyị «Na-eduga na Snapshot MX Linux».
Ma ugbu a maka nke gị ibudata, nwụnye na iji, anyị ga -eji ntuziaka ahụ Debian GNU / Linux nke «Ntuziaka nwụnye».
Budata, wụnye na jiri
para Distros Debian 10 (Onye na -arụ ọrụ) ma ọ bụ dabere na ha, nhọrọ kacha mma ibudata, nwụnye na iji de "Kokpiiti" , bụ ịhazi faịlụ Ebe nchekwa Debian Backport, site n'ebe ahụ iji ụdị kachasị ọhụrụ enwere ike jiri ihe niile mee nke ọma. Maka nke a, a ga -emerịrị ihe ndị a nye iwu na ọnụ (njikwa) nke Sistemụ arụmọrụ gị:
Mgbe ahụ anyị nwere naanị emeghe nchọgharị na pịnye na adreesị adreesị mpaghara ma ọ bụ nke dịpụrụ adịpụ nke akụrụngwa anyị chọrọ ijikwa. Ọ bụrụ na ọ bụ kọmpụta dịpụrụ adịpụ, ọ ga -abụrịrị na etinyere ya "Kokpiiti", dị ka e gosiri n'okpuru:
Maka ozi ọzọ na "Kokpiiti" ị nwere ike lelee njikọ ndị a:
Ngwa (Plugins / Plugins)
Na nchịkọta, dịka a hụla "Kokpiiti" dị ka Nagios Isi a nnukwu software ngwá ọrụ na ubi nke Netwọk / Sava na Ndị nchịkwa Sistem / Server (SysAdmins). Mana gafere ịbụ onye ọzọ ma ọ bụ nnọchi Nagios Isi Ọ bụ kama onye enyemaka zuru oke, imepụta ngwa ngwa maka nleba anya na njikwa akụrụngwa (onye ọbịa) na netwọkụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Netwọk / Sava » Cockpit: Ngwa nwere interface weebụ maka nchịkwa sava
Nhọrọ ọzọ bụ webmin ..
Ekele, Luix. Daalụ maka nkọwa na ntinye gị.
Ọchịchị abalị 4.8.27 na -abịa na nkwalite na nkwado dị iche iche maka alacritty na ụkwụ